Khamiis, Dec 17, 2020-Muuse Biixi ” Soomaaliya waxey noo furtay albaab dhib yar oo uu ictiraafku ku iman karo – LaacibOnline
Muuse Biixi ” Soomaaliya waxey noo furtay albaab dhib yar oo uu ictiraafku ku iman karo
Khamiis, December, 17, 2020 (HOL) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay kulamadii uu la soo qaatay madaxda dalka Kenya, gaar ahaan madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Muuse Biixi ayaa sheegay in magaalada Nairobi loogu soo dhaweeyay si maqaam sarre ah, isaga oo dhinaca kale soo hadal qaaday go’aanka dowladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay Kenya.
Warfidiyeenkii su’aalaha weydiinayay ayuu uga jawaabay sida uu u arko go’aanka Soomaaliya ay xiriirkii Diblomaasiyadeed ugu jartay Kenya, isaga oo yiri” Arintaasi fursad ayeey inoo aheyd, iyaguna xiriirka ayeey u jareen, Annagu-na iyaga ayaa badalnay, waxey noo fureen albaab dhib yar oo uu ictiraafku ku iman karo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Muuse Biixi.
Muuse Biixi ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in dowladdaha Africa oo idil kala hadlaan arinta ku saabsan ictiraafka isaga oo yiri” wey naga go’an tahay 54ta dowladood ee Africa midba mar ayeeynu u taggi doonaa”
Dhinaca Qaadka miirooga mar uu soo hadal qaaday ayuu sheegayi in uu si caadi ah u yimaado magaalada Hargeysa, waxaana uu dowladda Kenya ku tilmaamay dalka sedexaad ee Afrika ugu dhaqaalaha Badan sidaa daraadeed muhiimad gaar ah siinayaan xiriir ay la yeeshaan,
Waxaa uu guulweyn ku tilmaamay wadahadalladii dhaxmaray isaga iyo madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta oo sida uu hadalka u dhiggay wax-yaabihii lagu heshiiyay laga soo saaray war-murtiyeed wadajir ah.
Dowladda Soomaaliya oo siweyn uga carreysan tallaabada ay qaaday dowladda Kenya ayaa Tallaadadii toddobaadkan ku dhawaaqday in ay xiriirka u jirtay Kenya, waxaana ay ku amartay Diblomaasiyiinta ka jooga Nairobi in ay si deg deg ah dalka ugu soo laabtaan.
← Africa: The Hole in Africa’s Heart
Somalia and UK Discuss Humanitarian Cooperation →
Isniin, Sept 7 , 2020-Shir Nabadeed oo magaalada Adhi-cadeeye uga bilaabmay laba beelood iyo amaanka oo la adkeeyey
Sabti, Sept 5 , 2020-Mareykanka oo hoggaamiyayaasha Soomaaliya ugu baaqay isu tanaasul